Lalao maimaimpoana 5 miaraka amin'ny fanohanan'ny Linux | Ubunlog
rehefa miresaka momba ny lalao amin'ny Linux izahay Ny zavatra eritreretinao voalohany dia ny hoe saika tsy misy zavatra mahaliana na angamba nieritreritra an'i divay avy hatrany ianao, indrisy fa mbola eritreritra fa maro no tsy afaka ao an-dohany.
Izany dia vokatry ny fa nandritra ny fotoana ela dia tsy nanana katalaogin'ny lalao tsara i Linux Ary miresaka momba ny 10 taona lasa aho, izay raha te hankafy titre tsara ianao dia tsy maintsy nanao configurations maro teo aloha ary miandry ny zavatra rehetra hihazakazaka tanteraka nefa tsy misy fihemorana.
Androany dia niova izany, na dia tsy feno tanteraka aza ny fandehan'ny fotoana, dia mbola ampiana lohateny vaovao izay azo tanterahina amin'ny Linux sy ny ampahany lehibe amin'ity dia azontsika omena ny sehatra Steam ary ny zava-misy fa naka ny Linux ho fototra hamoronana rafitra misy azy.
Androany Izahay dia hizara aminareo ny sasany amin'ireo lohateny izay hitanay amin'ny Steam ary ny hafa izay tsy hitanay. Miankina amin'izany izy ireo, izay afaka tanteraka ary tena tsara mba hahatonga anao hanana fotoana mahafinaritra.
1 ady Varatra
Raha emitady anaram-boninahitra tena manintona miorina amin'ny ady ianao, andramo ny War Thunder.
War Thunder dia lalao an-tserasera marobe marobe, ity lalao ity dia mety indrindra ho an'ireo tia lalao iraka, War Thunder no napetraka tamin'ny vanim-potoana miaramila 1940/1950. Milalao ny lalao amin'ny fiaramanidina, tanky, tarehin-tsoratra ary gadget ianao izay azo havaozina ary hahazo fahasimbana misy.
Maimaimpoana ary manana safidy hividy fitaovam-piadiana sy fitaovam-piadiana tsara kokoa ianao ary hametraka ny atiny amin'ny lalao amidy aza.
Onraid Lalao fitifirana 2D izany fa raha milalao Contra ianao dia hampahatsiahy anao betsaka izany, fa hey Onraid tsara kokoa. Ity lohateny ity dia manasongadina mpilalao tokana, MMO, koperativa an-tserasera, multiplayer eo an-toerana, ary maody lalao multiplayer an-tserasera
Afaka mampihatra paikady manokana ny mpilalao na dia mampiasa fividianana fampiharana aza hanatsarana ny vintana handresena.
DotA 2 dia lalao multiplayer eksklusif Steam izay sangan'asa mazava tsara satria afaka nandresy mpilalao 800,000 XNUMX isan'andro. Ny maha-lohateny malaza indrindra azy, Dota 2 dia azo antoka fa tsy maintsy ananana ho an'ireo izay tsy nilavo lefona haingana loatra.
Ity dia lalao hetsika paikady fotoana isometrika 3D isam-potoana ary ny tohin'ny Warcraft III mod, Fiarovana ny Ntaolo.
Amin'ny ankapobeny ny tanjon'ny lalao dia ny filalaovana ekipa misy olona 5 handrava ny ekipa mpanohitra ary hanangona zavatra tsara nomerika eny an-dalana.
Ampidino ny Dota 2
Super Tux Kart Lalao malaza eo amin'ny fiarahamonina gaming Linux izy io. Ity elalao hazakazaka izany Lalao kart izay manana ny mason'izy ireo mascots an'ny sasany amin'ireo tetikasa rindrambaiko maimaim-poana malaza indrindra toa an'i Tux, GNU, ny daemon BSD ary ny elefanta PHP.
Miaraka amin'ny hazakazaka 20 mahery, maodin-dalao 6, ary safidy milalao fanatsarana isaky ny famoahana fanavaozana, SuperTuxKart dia natao ho an'ireo mpilalao mankafy ny fientanentanana amin'ny fifaninanana kart.
Sintomy ny SuperTuxKart
0 AD nanomboka ho mod ho an'ny Age of Empires II ary avy eo dia raisina ho iray amin'ireo tetik'asa lalao rindrambaiko maimaimpoana tsara indrindra.
0 AD dia lalao ady mahasarika izay mametraka mpilalao ao anatin'ny vanim-potoana tantara foronina. Aza diso, na izany aza, nisy ny sivilizasiona taloha, satria nandany ny fotoanany ireo mpandrindra mba hampidirana am-pahataperana ny sarintany, tranobe, tsangambato ara-tantara, sns.
Sintomy ny 0 AD
Na dia kely aza ity lisitra ity ary be dia be ny katalaogy atolotry ny Steam, dia fantatry ny sasany amin'ireo tafiditra eto.
Raha fantatrao izay misy lohateny hafa azonay ampidirina ato amin'ity lisitra ity na azonay resahina, dia aza misalasala mizara izany aminay amin'ireo hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Lalao maimaimpoana 5 miaraka amin'ny fanohanan'ny Linux
Izaho no voalohany manome hevitra yahoo
Salama !!, te hanampy aho fa maro ny lalao azo alaina, (ny iray dia minecraft) Pd: minecraft Manana izany amin'ny linux aho
Minecraft dia afaka mihazakazaka amin'ny rafitra fiasa rehetra izay apetraka java.
Ahoana ny fametrahana Lubuntu 18.04 amin'ny solosainay